घरमा आराम गरिरहेकी कलाकार पल्पसाको मृ’त्युको ख’बर कसरी बाहिर आयो?:: Mero Desh
घरमा आराम गरिरहेकी कलाकार पल्पसाको मृ’त्युको ख’बर कसरी बाहिर आयो?
Published on: १८ भाद्र २०७८, शुक्रबार ०६:३९
काठमाडौं । यतीबेला घरमा आराम गरिरहेकी हास्यव्यंग्य अभिनेत्री पल्पसा डंगोलको परिवारलाई सोरबार र मंगल बार धेरैले फोन गरेर पल्पसा को अवस्था बारे जानकारी” लिए टिकटक चलाउनै कुनै व्यक्तिले पल्पसा को तस्बिरमा ‘श्रद्धाञ्जली’ लेखेर सोमबार टि”कटक बनाए पछि” धेरैले
आत्तिँदै उनका परिवारलाई फोन गरेका हुन् । धेरैले उनको टिकटकमा लेखिएको श्रद्धाञ्जलीबारे प्रश्न राख्दा उनका आफ्नाले हैन भनेर प्रस्ट पार्नुपरेको थियो । कसैलाई पनि एक्कासी श्रद्धाञ्जली लेख्दा त्यो व्यक्तिको परिवारदेखि शुभचिन्तकसम्म आत्तिनु स्वाभाविक नै हो । यही समस्या
पल्पसा र उनको परिवारले अहिले भोग्नु प’रेको छ’। र यो प्रसंगमा हा”स्यव्यंग्य अभिनेत्री पल्पसाले ‘राजधानी सँग भनिन्, ‘टिकटकको भ्युज बढाउने नाममा जिउँदो मान्छे लाई यसरी हा’र्दिक श्रद्धा’ञ्जली लेखेर भिडियो लोड गर्दा कति पीडा हुन्छ होला यस्तै पीडा अहिले म, मेरो परिवारले
भोग्नुपरेको छ,’ उनले अगाडि थपिन्, ‘म स्वास्थ्य उपचार गराइरहेको बेला टिकटिक चलाउनेहरूले मेरो तस्बिरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेर पटकपटक भिडियो लोड गर्दै मलाई जिउँदै मारिरहेका छन् । गत महिना पनि मलाई यस्तो पीडा दिइएको थियो र हिजो मंगलबार पनि यस्तै
“पीडादायी कार्य टि”कटक चलाउनेहरू ले गरेका छन्” ।’
हास्यव्यंग्य अभिनेत्री पल्पसाले टिकटकमा भ्युज बढाउन यसरी जिउँदै मानिसलाई मार्ने काम बन्द गर्न आग्रह गरेकी छन् । यस्तो कार्यले आफूहरूजस्ता बिरामीलाई मानसिक रूपमा साह्रै तनाव हुने मनोबल खस्कने पनि उनले बताए
की छन् । अहिलेको अवस्था आफूलाई हौसला र साथको आवश्यकता भएको पनि उनको कथन छ ।हास्य अभिनेत्री पल्पसा डंगोलको स्वास्थ्यमा केही सुधार आएको छ । गत महिना दुईवटै मिर्गाैलाले काम गर्न छाडेपछि काठमाडौंको त्रिविवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएकी उनी केही समय
उपचारपछि अहिले घरमै आराम गरिरहेकी छन् । उनले अहिले ग्वार्कोस्थित किस्ट अस्पतालमा डाइलसिस गरिरहे की छन् । आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे उनले राजधानीसँग भनिन्, ‘पहिलाको भन्दा केही सुधार भएको छ । अहिले आफैं नुहाउने, खाना बनाएर खाने तथा सा”मान्य हिँडडुल
गर्न सक्ने भएकी छु ।’करिब एक महिना शिक्षण अस्पताल बसेर घर फर्किएकी उनी पछिल्लो समय कीर्तिपुरको पाँगा स्थित माइतमा बस्दै आएकी छन् अहिले सातामा दुईपटक किस्ट अस्पतालमा डा”इलसिस गरिरहेको पनि उनले जान कारी गराइन् ।अभिनेत्रीले अबको केही समय मा’ मिर्गाैला
प्र”त्यारोपण गर्ने पनि बताएकी छन् । एक जना आफन्त मिर्गौला दिन तयार भएको र मिर्गाैला प्रत्यारोपणका लागि अहिले आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण पनि गरिरहेको उनले बताइन् । सबै परीक्षण सकिएको र अब पनि आफूहरूको मिर्गाैला ‘म्याचिङ’को” परीक्षण यो सा”ता हुने पनि उनले”
बताइन् । यदि म्याचिङ भएको खण्ड मा आफू मिर्गौला” प्रत्यारोपणको तयारीमा जुट्ने पनि उनले जनाएकी छन् ।
पाँच वर्षअघि नै एउटा मिर्गाैला खराब भएपछि पल्पसाले निकै सजगता अपनाउँदै आएकी थिइन् । दुई महिनाअघि एक्कासि अर्को पनि मिर्गाैलाले काम गर्न छाडेपछि अहिले
को यो अवस्थामा आफू पुग्नु परेको पल्पसाको कथन छ । तथापि शुभचिन्तकहरूको साथ, हौसला र प्रेरणाले भने आफ्नो आत्मबल निकै उच्च हुँदै गरेको पनि उनले बताए की छन् । आजको राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिको छ ।